Looks Nepal | » ‘नम्रतालाई देखेर डाहा लाग्छ’ – बन्दना ठाकुर Looks Nepal ‘नम्रतालाई देखेर डाहा लाग्छ’ – बन्दना ठाकुर – Looks Nepal
० आजकल के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
– आजकल मोडलिङ्गको साथसाथै पढाईमा व्यस्त छु ।
बन्दना ठाकुर (मोडल)
मलाई सुशान्त के.सी. मनपर्छ
० अध्ययन कहाँ पुग्यो ? मोडलिङ्ग र अध्ययनलाई सँगसँगै लिएर जान कत्तिको सहज छ ?
– फर्मास्युटिकल इण्डष्ट्रिजको ब्याचलर सकियो र यसैको इन्टर्न गर्दैछु । मोडलिङ्ग र अध्ययनलाई एकैसाथ लिएर अलि गाह्रै पर्छ तरपनि सँगसँगै लाने कोसिस गर्दैछु ।
० साथीको परिभाषा दिनु पर्दा ? कस्ता साथीहरु मन पर्छ ? तपाइका मिल्ने ३ साथी सम्झिनु पर्दा?
– मेरो जीवनमा साथीहरु थोरै नै छन् र म ऊनीहरुलाई साथी भन्दा नि परिवारकै सदस्य सरह मान्छु । कस्ता साथीहरु मन पर्छ भन्दा नि साथी त साथी नै हुन्छ नि ! बिना पैसाको, बिना पढेलेख गरेको नत बिना कुन्नि रुपको ।
० कस्ता गीत संगीत मन पर्छन ? मन पर्ने गायक को हुनहुन्छ ? उहाँको कुन गीतले मन छोएको छ र किन ?
– रोम्यान्टिक र सेन्टिमेन्टल गीतहरु धेरै जसो सुनिराको हुन्छु । मलाई सुशान्त के.सी. मनपर्छ र गीत भन्दा चै ‘मायामा…….’ । यो गीत सुन्दा राम्रो लाग्छ ।
० मन पर्ने ड्रेसअप कस्तो हो ? कस्ता पहिरनमा आफूलाई सहज महशुस गर्नु हुन्छ ? घरमा सबैभन्दा बढी कस्ता पहिरन छन् ?
– मलाई कुर्ता र वनपिस मनपर्छ । मानिसले जस्तो पहिरन गरेपनि आफुलाइ सहज महसुस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र यो व्यक्तिगत कुरा नै हो । घरमा सबैभन्दा बढी टी–सर्ट र प्यान्ट नै लगाउछु ।
सेक्स भनेको पनि ठुलो कुरो हो र सेक्सको लागि दुई बिचको भावनामाहरु बाँधिनु आवश्यक छ ।
० घुम्नको लागि कस्तो ठाउँ रुचाउनुहुन्छ ? तपाईको नजिकैका मनपर्ने गन्तव्य कुन हुन र अलि टाढा जानु पर्दा कहाँ जान मन छ ?
– घुम्न जादा शान्त र रमणीय वातावरणको ठाउँ नै मनपर्छ । नजिकैको मनपर्ने गन्तव्य बौद्ध हो । मलाई पुरै नेपाल घुम्न मन छ ।
– मलाई थकाली खाना मनपर्छ । घरमा कहिलेकाहीँ खाना बनाउने गर्छु । अब आफुलाई त सबै कुरा मिठो नै पकाउछु जस्तो लाग्छ ।
० कस्ता पुस्तकले मन छुन्छन ? कस्का पुस्तक दोहोराएर पढनु भएको छ ? नाम सुनेको तर पढन नपाएको पुस्तक छन कुनै ?
– रोम्यान्टिक र सेन्टिमेन्टल स्टोरीका पुस्तकहरु पढ्न रुचाउँछु । पुस्तकहरु धेरै नै पढेको छु, तर दोहोर्याएर पढेको छैन । नाम सुनेको तर पढ्न नपाएका पुस्तकहरु धेरै नै छ । समय मिलाएर पढ्नेछु ।
– कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा विवाह भनेको धेरै नै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ । दुई परिवारलाई बाँध्ने काम गर्छ विवाहले । सेक्स भनेको पनि ठुलो कुरो हो र सेक्सको लागि दुई बिचको भावनामाहरु बाँधिनु आवश्यक छ । विवाहपुर्व को शारिरीक सम्बन्ध व्यक्तिगत कुरो हो ।
० यदि केटा भएर जन्मिनुभएको भए ?
– अहिले केटी हँुदा जति दुःख, पीडा जस्ता यावत् कुराहरु त छँदैछन् । त्यसरी नै केटा भएर जन्मिँदा पनि त्यत्तिकै आफ्नै दुःख, जिम्मेवारीहरु हुन्छन् । केटाहरुको जीवन पनि सजिलो त अवश्य नै छैन होला ।
०कुन सेलिब्रेट देख्दा डाहा लाग्छ, किन?
– मलाई नम्रता श्रेष्ठ धेरै नै मनपर्छ । मैले नम्रता श्रेष्ठलाई देखेर नै मलाई पनि तेस्तै हुन मन लाग्छ । एउटा सफल नायिका बन्नु नै मेरो लक्ष्य हो ।
० यदि तपाईले आफ्नो रुप फेर्ने वरदान पाउनुभयो भने कस्को रुपधारण गर्नुहुन्छ ?
– म आफ्नो रुप फेर्न चाहँदिन । म जस्तो छु त्यस्तै ठिक छु जस्तो लाग्छ ।
आफ्नो परिवारलाई माया गर्नुस् र आफ्नो नजिकको साथीहरुलाई माया गर्नुस् तर, आफुले आफुलाई नै माया गर्न चाहिँ नबिर्सनुस् ।
० घरमा झुट बोलेर कहिले कतै जानु भएको छ ?
– घरमा झुठो बोलेर साथीहरुसँग घुम्न गाकी छु ।
– भविष्यमा म आफ्नो पढाई र मोडलिङ्गलाई सँगसँगै लग्दै एक सफल नायिका बन्न चाहन्छु ।
– मलाई अन्डरवाटर डाइभिङ गर्न मन छ र जीवनमा एकपल्ट अवश्य नै गर्न चाहन्छु ।
० केही भन्नु छ ?
– सर्वप्रथम त तपाई लगायत लुक्सनेपाल परिवारलाई मेरो कुरा राख्न दिनुभएकोमा धन्यवाद् । मेरो भनाई यत्ति हो कि, आफ्नो परिवारलाई माया गर्नुस् र आफ्नो नजिकको साथीहरुलाई माया गर्नुस् तर, आफुले आफुलाई नै माया गर्न चाहिँ नबिर्सनुस् ।
प्रस्तोताः सोनी श्रेष्ठ